Beddelaan BlockTrade In US dollar
Updated 19/01/2020 08:17
Beddelka BlockTrade In US dollar. BitTorrent qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
10 000 BitTorrent = 3.61 US dollar
Qiimaha sarrifka lacagta digital wuxuu leeyahay qiimo celcelis ahaan maalintii. Macluumaadka ku saabsan isweydaarsiga lacagta digital ee laga helo ilo furan. BitTorrent sicirka ayaa hoos u dhacay ilaa shalay. Marka loo eego 1 BitTorrent hadda waxaad u baahan tahay inaad siiso 0.000361 US dollar. Heerka BitTorrent sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego US dollar ee -452 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
Heerka Sarrifka BitTorrent In US dollar
Usbuuc ka hor, BitTorrent waa la iibsan karaa 0.073531 US dollar. Hal bil ka hor, BitTorrent waxaa lagu badali karaa 0 US dollar. Sadex sano ka hor, BitTorrent waxaa lagu iibin karaa 0 US dollar. Sicirka sarrifka ee BitTorrent to US dollar waxaa lagu arki karaa shaxda. -99.51% - isbeddelka heerka sarrifka ee BitTorrent to US dollar usbuucii. 0% bishii - isbeddelka heerka sarrifka BitTorrent.
BitTorrent (BTT) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
BlockTrade ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican BlockTrade qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso BlockTrade maanta.
CEX.IO BTT/USD $ 0.000379 $ 2 715 -
Bitfinex BTT/USD $ 0.000374 $ 11 949 -
BlockTrade ugu fiican US dollar dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital BitTorrent US dollar
BitTorrent (BTT) In US dollar (USD)
10 000 BitTorrent 3.61 US dollar
50 000 BitTorrent 18.05 US dollar
100 000 BitTorrent 36.10 US dollar
250 000 BitTorrent 90.25 US dollar
500 000 BitTorrent 180.51 US dollar
1 000 000 BitTorrent 361.02 US dollar
2 500 000 BitTorrent 902.55 US dollar
5 000 000 BitTorrent 1 805.09 US dollar
Maanta, 10 BitTorrent waxaa laga iibsan karaa 0.00361 US dollar. Maanta, 0.009025 US dollar waa la iibsan karaa 25 BitTorrent. Waad isdhaafsan kartaa 0.018051 US dollar for 50 BitTorrent. Beddelaadda Lacagta digital hadda 100 BitTorrent ayaa ku siinaya 0.036102 US dollar. Beddelashada 250 BitTorrent qiimaha 0.090255 US dollar. Hadaad leedahay 500 BitTorrent, ka dibna gudaha British Virgin Islands waad iibsan kartaa 0.18 US dollar.
BitTorrent (BTT) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan BTT/BTC maanta 19 January 2020
15/10/2018 0.073531 -
BitTorrent to US dollar dusheeda 15 October 2018 waa u siman yahay 0.073531 US dollar.
BitTorrent (BTT) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
BitTorrent iyo US dollar
BitTorrent codka lacagta digital BTT. BitTorrent ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 06/08/2018.